အချစ်ဆိုတာ………………..ဘာလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » အချစ်ဆိုတာ………………..ဘာလဲ
Posted by kyeyounglin on Sep 20, 2011 in My Dear Diary | 17 comments
<img src="http://winkkk.com/photo/9609.gif" alt="07 – Avril Lavigne – I Love You
ဘာကြောင့်လဲလို့ စဉ်းစားလာခဲ့ ကြတာ….ဟိုးးးခေတ်အဆက်ဆက်ကတည်းက
သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်………..အာဒဏ်နဲ့ အင်းဝရဲ့ ပန်းသီးတစ်လုံးကိုသွားတွေ့ တယ်ဗျ
ကျွန်တော်ခံယူထားတဲ့ အချစ်ဆိုတာကတော့ 
ဖန်တီးဖျောက်ဖျက်လို့ မရတဲ့ အရာ…………….
ကျွန်တော်သူ့ ကိုချစ်ခဲ့ တာ ဖန်တီးခဲ့ တာမဟုတ်သလို ဖျောက်ဖျက်ပစ်လို့ လဲရမှာမဟုတ်ပါဘူး
ကျွန်တော့်နဲ့ သူ့ ကြား……စည်းဘယ်လောက်ခြားခြား……..မိုင်တွေဘယ်လောက်ဝေးဝေး
ကျွန်တော့်နှလုံးသားထဲသူရှိနေသရွ်ျ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်တော့မှဝေးမှာမဟုတ်ပါဘူး…..
အာဒဏ်နဲ့ ဧ၀တွေ့ ခဲ့ ကြတာ..ဧဒင်ဥယာဉ်ကြီးထဲမှာပါ…တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာသူတို့ နှစ်ယောက်ပဲရှိခဲ့ တာ
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်တွေ့ ခဲ့ တာကတော့ ……….Online ပေါ်မှာ
ကမ္ဘာပေါ်ကလူပေါင်းများစွာသုံးစွဲနေကြတဲ့G talk ထဲမှာ…………….
ကျွန်တော်တို့ အချစ်ကအာဒဏ်နဲ့ အင်းဝ ထက်သာတဲ့ အချစ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်
အာဒဏ်နဲ့ အင်းဝကပန်းသီးစားမိလို့အချစ်စ်ိတ်ဖြစ်တာ…….ကျွန်တော်တို့ လိုအွန်လိုင်းကချစ်သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူတွေကတော့မတူဘူးဗျ
ဘယ်သူမှန်းမသိ…..ဘယ်ကမှန်းမသိ…..ချောတယ်မချောဘူးလဲပြောလို့ မရ…….ဖြူလားမဲလားမသိနဲ့ 
ပန်းသီးကမှမဟုတ်ဘူး……….ပန်းတစ်ပွင့်၊ စကားတစ်ခွန်း၊အသံ၊ အပြုံး၊ အပြုအမူတစ်ခုခု၊ ပုံရိပ်၊ ဆံစ၊စတဲ့ အရာအားလုံးကအချစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်
တစေသရဲတစ်ကောင်လား……ဘာလို့ လဲဆိုတော့သူ့အကြောင်းကိုလူတိုင်းပြောပြီးသူ့ကိုဘယ်သူ့ မှမမြင်ဖူးကြဘူးလို့ လေ
<img src="http://winkkk.com/photo/3963.jpg" alt="
View all posts by kyeyounglin →
အာဒဏ်နဲ့အင်းဝမဟုတ်ပါဘူး…. အာဒံနဲ့ဧ၀ပါ။ kyeyonglin ရဲ့ online ပေါ်က အချစ်က ဘယ်လိုမှမတည်
မြဲနိုင်ပါဘူး…အဲဒါက အချစ်မဟုတ်ပါဘူး…လေသံလေးတွေကြားထဲစကားလုံးလေးတွေကြားထဲက ရင်ခုန်မှုသက်သက်ပဲ…ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အချစ်ဆိုတာ ပေးဆပ်ခြင်းလည်း မဟုတ်ဘူး…ရယူခြင်းလည်း မဟုတ်
ဘူး…ချစ်နေဖို့သက်သက်လည်း မဟုတ်ဘူး…သစ္တေသရဲလည်းမဟုတ်ဘူး… စိတ်ကနေဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့
စကားလုံးတစ်ခုပဲ… အဲဒီစိတ်ကို နိုင်အောင်ထိန်းနိုင်ရင်…အဲဒီ့အချစ်ဆိုတာကြီးလည်း ပျောက်သွားလိမ့်မယ်
lone ကတော့ အဲဒီစိတ်ကို မထိန်းနိုင်သေးပါဘူး..
ကျွန်တော်ကတော့ ဘယ်လိုနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အချစ်ရှိတယ်လို့ လက်ခံပါတယ်
လေလှိုင်းကြားက သာယာမှု ဒါမှမဟုတ်ရင် ခဏတာပျော်ရွှင်မှုပေါ့။ရေရှည်တည်တံ့ပေါ့မလား။
online ကအချစ်ဆိုတာကို မယုံတာမဟုတ်ပါဘူး…အယုံအကြည်ကို အစကတည်းကမရှိတာ…
အဲဒီ အွန်လိ်ုင်းပေါ်က အချစ်က မတည်မြဲဘူးဆိုတာ
လုံးဝ ဖြူ့ အတွက်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ယုံကြည်တယ်
”ဘယ်သူမှန်းမသိ…..ဘယ်ကမှန်းမသိ…..ချောတယ်မချောဘူးလဲပြောလို့ မရ…….ဖြူလားမဲလားမသိနဲ့ 
လူမမြင်ဘူးဘဲ အွန်လိုင်းမှာ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေ ဆွေးနွေးရင်း ချစ်သူဖြစ်သွားကြတာပါလိမ့်။ သိချင်မိတယ်။ (တကယ်မကြုံဘူးလို့ သိချင်တာပါ)။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အွန်လိုင်းမှာ ရည်းစားထားတယ်။ သူက စိတ်သိပ်ပျော့ပြီး အတွေ့အကြုံနည်း၊ ယုံလွယ်၊ ဆင်ခြင်ဥာဏ်မမြင့်ဘူး။ အင်တာနက်ဆိုတာ ဘာမှန်းတောင် ကောင်းကောင်းမသိသေးပဲနဲ့ အလျော်ကောင်းလို့ အွန်လိုင်းရည်းစားရသွားတော့ သူငယ်ချင်းတွေက သူ့ကို စိတ်ပူခဲ့ကြတယ်။ မွှန်နေခဲ့တဲ့အချိန်ဆိုတော့ ပြောမရ၊ တားမရပေါ့။ တားတဲ့သူတွေ၊ အကျိုးအကြောင်းပြောပြတဲ့သူတွေဟာ သူ့ရန်သူနီးပါးဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။
သူ့လူက သူ့ဓါတ်ပုံမပြဘူး။ သူ့ရုပ်အစစ်အမှန်ဘာလဲဆိုတာ ၀က်ကမ်နဲ့ပြဖို့ ငြင်းတယ်။ မိန်းကလေးကပဲ သူ့ရုပ်ကို ၀က်ကမ်နဲ့ပြရတယ်။ သူ့နောက်ကြောင်းကဘာလဲ ကောင်မလေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိဘူး။ (မိန်းမရှိလားဘာလား။ ရောဂါအခံရှိလားဘာလားညာလား စသဖြင့်ပေါ့) သူ့မြန်မာပြည်နေရပ်လိပ်စာအတိအကျလည်း မပေးဘူး။ ဒီလောက်ဆိုလုံလောက်ပြီလေ။ အဲဒီလူကို ခေါင်းထဲထည့်သင့်မထည့်သင့်။ မရပါဘူး။ မိန်းမကမွှန်နေတာ။ အသံလေးကိုပဲ ချစ်တာပါဆိုပြီး။ အဲလောက် သောက်သုံးမကျတော့လည်း ခံပေါ့။
Match.com လို online Dating site တွေကနေ..ချစ်ကြ၊ ကြိုက်ကြ၊ မင်္ဂလာဆောင်.. အိမ်ထောင်ကျနေတွေ.. ကမ္ဘာတလွှား.. ၁၀သန်းမကရှိတာတော့ …သေချာတယ်…။
ဒစ်ဂျစ်တယ်နဲ့.. ရှိနေတဲ့.. အင်တာနက်လောကက.. အပြင်နဲ့စာရင် ပိုတောင်တိတိကျကျ.. ဖြစ်တဲ့ ရလဒ်ထုတ်ပေးသေးတယ်..။ စက်တွေက..လိမ်မှမလိမ်တတ်တာနော…
အချစ်ဆိုတာက .. ကျွန်တော်တို့ရပ်ကွက်ထဲက ကောင်မလေးကိုပြောတာဖြစ်မယ်… ဟိဟိ.. နောက်တာ
အချစ်ဆိုတာကိုပြောရရင် ကျွန်တော့အမြင်က ရယူပိုင်ဆိုင်ခြင်းလို့မြင်တယ်..
Online မှာတင် မထိခလုပ် ထိခလုပ်တွေပြောပြီး ချစ်ကြိုက်သွားတဲ့ လူတွေ တွေ့ဖူးသလို့ … လက်ထပ်ပေါင်းသင်းသွားတဲ့ အဖြစ်တွေလည်း မြင်ဖူးပါတယ် … တချို့ကျတော့လည်း မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်မကိုက်ပဲ … ခဏတာ စိတ်ဖြေရာအဖြစ် ခိုနားပြီး … ပြန်ထွက်သွားကြတာမျိုးရှိတယ်… ။
ကျွန်မကတော့ အွန်လိုင်း အချစ်ကို မယုံပါဘူး .. တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပြင်မှာတွေ့ပြီး သိနေတာတောင် သူ့အကြောင်း ကိုယ့်အကြောင်း လုံးစေ့ပတ်စေ့နားလည် နိုင်ဖို့ ခက်သားကိုး …အွန်လိုင်းမှာ စကားလှလှတွေ ပြော ၊ ချွဲချွဲနွဲ့ နွဲ့ တွေ ပြောနေတာက တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀လို့ .. တချို့လူတွေ ခံယူထားတယ် … ။ မျက်စိရှေ့တင်တော့ .. အွန်လိုင်းအ ချစ်ဆိုတာ … ခိုင်မြဲ ဖို့ ခက်ပါတယ် … ။
ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျ……………အားလုံးရဲ့ အမြင်ကတော့ တစ်ယောက်တစ်မျိုးမှန်ကြပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို အစအဆုံးတင်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်…………..
အဓိက က ကိုယ်ပဲလို့ ထင်ပါတယ်…….
အင်းဝရဲ့ ပန်းသီးတစ်လုံးကိုသွားတွေ့ တယ်ဗျ)) ဆိုတော့ အင်းဝ အအေးဆိုင်မှာ ပန်းသီးဖျော်ရည်ရနေပြီလား ကိုပေါက်ကလည်းဘာမှပြောသေးပါဘူး..။ ဈေးချိုနားက အင်းဝအအေးဆိုင်ကိုပြောတာနော်………..။